Mashandisiro ekushandisa SUDO isina password | Linux Vakapindwa muropa
Mashandisiro eSUDO isina password
Tese tinoziva iyo sudo yekuraira, iyo «yakachengeteka» chinotsiva su, uye tataura zvakawanda mu blog ino nezvazvo, uye nezve zvakanakira kushandisa Sudo vs su, asi panguva ino ticha kuratidza iwe, kune avo vasati vazviziva , yakapusa dzidziso nhanho nhanho yemashandisiro ekushandisa chishandiso ichi pasina kuisa password yacho. Kune veNewbies, taura kuti basa rayo nderekukusimbisa semushambadzi kana mudzi kwenguva pfupi kuti uite zvimwe zviito zvekutonga zvinoda ropafadzo pasina kudiwa kwekuvhura chikamu semudzi pamwe nenjodzi dzinogona kuvepo.
Zvakanaka, isu tese tinoziva kuti kupinda Sudo pane yekuraira tambo, kazhinji inoteverwa nemirairo yatinoda kushandisa neropafadzoSezvo ichi chingave chiri kuiswa kwepakeji uchishandisa maneja wepakeji, iyo sisitimu pakarepo inotikanda isu kukurumidza kuitira kuti tikwanise kuisa password kuti tiwane ropafadzo dzataurwa nekuita rairo. Asi ... ko kana isu tisingafanirwe kuisa password?
Ndozvatinoda mini-dzidziso uye uye matanho acho zviri nyore kwazvo:
Dzokorora unotevera kuraira kuti uchinje iyo faira / etc / sudoers:
Iye zvino mune zvirimo mune zvataurwa faira iwe unofanirwa tsvaga mutsetse une:
Uye pinda zvinotevera mutsara, kutsiva zita rekushandisa nerako:
Iye zvino isu tinochengetedza shanduko uye haizotibvunze password nguva inotevera patinomhanya Sudo kubva kuaccount yedu ...
Izvi zvinokurudzirwa here? Kwete, zviite panjodzi yako wega, asi vamwe vashandisi, kuitira nyore kana chero chimwe chikonzero, vangangoda kudzima ichi chikumbiro chepassword nguva dzese pavanomhanya Sudo ... Nenzira, kana iwe uchida mhinduro isina kusimba, unogona kugadzirisa inguva yenyasha iyo Sudo inomirira kukumbira password zvakare (iwe unogona kunge wakacherekedza kuti kana iwe uchimhanya Sudo kanoverengeka akateedzana, hazviwanzo kubvunza password). Ino yenguva yenyasha inogona kudzikiswa kana kuwedzerwa, uye pamwe kana uchizoita akawanda mabasa akateedzana zvinokurudzirwa kuti uite izvozvo pane kusabvisa password zvakananga. Iwo angori mazano!
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Resources » Mashandisiro eSUDO isina password
Izvo hazvishande kwandiri ... ini ndinoshandisa Kubuntu 12.04
Ini ndanga ndatoiyedza kare, sezvo ndine komputa mumba yekutandarira yandinoshandisa senzvimbo yemidhiya, uye inoshandiswa kubva pasofa. Ini ndanga ndagadzira script yekugadzirisa iyo vlc nechimwe chinhu chidiki, uye ndaida kuti isandibvunze password (saka ini handifanirwe kuenda kunovhura kabhodhi kwandinekhibhodi), uye handina kuti ishande.
Ini ndinofunga zviri nyore pane izvo zvauri kutsvaga kuti zviitwe, ipa basa kune cron semudzi unoita iwo script. Ndokunge, unomhanya crontab -e wobva wawedzera chimwe chinhu senge:
0 0 * * * mudzi /yourfolder/script.sh
Mumuenzaniso uyu waimhanya mazuva ese kuma12 husiku. Kwaziso
Pindura kune dhoki
Shandisa cron nekumhanyisa script semidzi, ne "crontab -e" woisa chimwe chinhu senge:
0 0 * * * mudzi /mydir/script.sh
Ini ndaimhanya uyu muenzaniso mazuva ese na12 husiku. Kwaziso
Iyo zvakare imwe sarudzo ... maita basa
Orlando Trivino akadaro
Mr. kana Mr. LinuxAdictos.
Kwaziso yakanaka kubva kune anogamuchira nhau dzako.
Chandinofarira ndechekuti ndibatanidzwe zvizere neemahara software -Linux -
asi ini handizive kuti kupi kana kupi uye kupi uye sei kutanga. Ini ndinokumbira chero kurudziro kana zano sezvo ini ndagara ndichida kuve mushandisi uye zvinopfuura kungova nyanzvi mune ino software. Ndinovimba iwe unoziva nzira yekunditungamira kuti ndigadzire iwo mabhesi ari mumutsara uyu.
Ini ndinotarisira kutenda kwangu nekubatana kwako uye nerubatsiro.
Pindura Orlando Triviño
Ini ndinofunga ingave tsika yakaipa inogona kupedzisira yaita kushaya hanya, kugadzirisa iyo / etc / sudoers. Chero ani akagadzira sisitimu akatozviita zvekuti iyo terminal haina kuratidza iwo mushandisi mushandisi uye mushure mechinguva kana iwe uchida kuita maneja basa zvakare, iyo sisitimu inokukumbira iwe password. Ini pachangu dzimwe nguva (zvakaipa kuitwa nenzira) kugadzirisa iyo system mune terminal ini ndinokanda rairo: Sudo -s uye mushure mekukanda password ini ndatova mudzi zvachose.
Mhoro! dambudziko rangu nderekuti mutero haundibvumire kunyora chero chinhu kana ndichikumbira password):
George Nguruve akadaro
Kana ikakubvumidza asi iri security system haikuregi kuti uone zvaunonyora. Asi chaizvo kana uri kunyora
Pindura kuna George Nguruve
Maitiro ekudzikamisa iyo cpu yekombuta yako neCPULimit